Indlu yonke ekhanyayo futhi enelanga yokulala engu-3 e-Downer! - I-Airbnb
Indlu yonke ekhanyayo futhi enelanga yokulala engu-3 e-Downer!
Downer, Australian Capital Territory, i-Australia
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Ren
U-Ren Ungumbungazi ovelele
Indlu enamakamelo amathathu e-Downer - eyangempela yezitini yama-1960! Indlu inelanga futhi ilula futhi isagcina izici ezithile zangempela - njengekhishi elipholile lesitayela sama-1960s! - kodwa w/ Izinsiza zesimanje inc. umshini wokuwasha izitsha kanye negumbi lokugezela elivuselelwe.
*** Uma kubhekwa ubhadane lwakamuva olubi (naluqhubekayo) lwe-Covid oludlangile emhlabeni wethu, sithanda ukukuqinisekisa ukuthi siyajabula ukubhuka ukuhlala isikhathi eside uma kunesidingo noma sifisa. Sithanda ukukwazisa nokuthi nakuba besivele siyi-OCD mayelana nokuhlanzeka, manje sesiwunyusile umdlalo wethu (njengabantu abaningi!). Ngakho-ke singakuqinisekisa ukuthi emva kokuhlala njalo ngeke sihlanze nje kuphela, kodwa futhi nesibulala-magciwane indlu yonke kanye nazo zonke izindawo. Lokhu sizokwenza sigqoke amagilavu ngokwethu. Sizophinde futhi sigcine isisetshenziswa sesanitiser ngesandla endlini ukuze sisetshenziswe izivakashi ngenkathi zisahleli.
Siphinde sibe nokufika ngaphandle kokuthinta kanye nokuhamba ukuya endaweni ngoba kufanele ubuyise ukhiye esizowulungiselela wona (futhi ungasiboni). Sizobulala ukhiye bese siwufaka esikhwameni ngemva kokuba isivakashi ngasinye sesihambile, silungele esilandelayo.
Kwelinye inothi lokugcina, lomuntu siqu, kwadingeka 'ngizihlukanise' amasonto amabili ngemva kokuba ngikwifilimu ehlelwe e-Sydney (ngoba ngangifuna ukuqiniseka ukuthi anginalutho engangingalunikeza ingane yami). Anginalutho futhi anginalutho, kodwa ngazenza ngedwa endlini futhi ngenxa yalokho ngaba ngumuntu wokugcina ukuhlala kuyo. Sicela wazi, lesi sifo sithatha ngokungathi sína ngendlela emangalisayo, ngaphandle kokuncishiswa kwemikhawulo yakamuva. ***
Amakamelo okulala amabili anemibhede ethokomele elingana nendlovukazi futhi eyakhelwe kumawodilophu. Kukhona negumbi lokulala lengane eyodwa kanye nomatilasi oyedwa owengeziwe esingawukhipha phansi ekamelweni lezingane, noma sidlulele endaweni yokuhlala phezu kwe-ottoman esingabe sesiyibopha ngesihlukanisi segumbi ukuze sibe yimfihlo. Lokhu kusho ukuthi indlu ingahlala ngokunethezeka abantu abadala abangu-4 umuntu ngamunye angase afise ubumfihlo - noma abantu abayisithupha uma imibhede yendlovukazi inabantu ababili komunye nomunye wabo. Siyajabula ukwenza enye yalezi zinketho zezivakashi futhi senze ngempumelelo esikhathini esidlule. Siphinde sibe ne-portacotty uma uyidinga yengane noma ingane.
I-House isendaweni ethule, enamahlamvu, engaphansi kwedolobha kodwa futhi imaphakathi kakhulu futhi iseduze nomgwaqo onguthelawayeka obheke eSydney noBarton Highway obheke eMelbourne. Futhi eduze kweDickson Shops, Civic kanye ne-ANU.
Sine-air-conditioner ephathekayo enamandla amakhulu engasetshenziswa uma izinsuku kushisa kakhulu (yize indlu ivaleleke kahle) - vele ubuze! Kukhona ukushisa okuphakathi nendawo ebusika.
QAPHELA: Ngokuvamile kuba nekati langaphandle lapha. Singavala umnyango wekati lakhe ukuze simvimbele ukuthi angangeni kodwa cishe uzohlala kwamakhelwane njengoba esaba abantu angabazi!
Futhi sicela uqaphele, azikho ezinye izilwane ezifuywayo - angikwazi ukuchibiyela uhlu!
I-Downer ingelinye lamadolobha amadala aseCanberra futhi emaphakathi kakhulu. Kukhona indawo yokupaka eningi ngaphandle komgwaqo noma ungapaka ku-drive.
Ngenxa ye-Covid, ukubingelela akuthinteki. Ngithinta isivakashi ngaphambi kokufika ukuze ngibazise mayelana nokungena njll. Nokho, sitholakala kukho konke ukuvakasha kwakho uma usidinga - ngokuvamile siqhele ngamaminithi angumakhelwane!
URen Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Downer namaphethelo